Mpanoratra Martech | Martech Zone
Ireo mpanoratra ny Martech zone dia vondron'orinasa matihanina, varotra, marketing ary teknolojia izay manome fahaiza-manao amin'ny sehatra maromaro, ao anatin'izany ny marketing amin'ny marika, ny fifandraisam-bahoaka, ny varotra pay-per-click, ny varotra, ny marketing engine, ny marketing amin'ny finday, ny marketing amin'ny Internet, ny ecommerce , analytics, fampiasana ary teknolojia marketing.
Ireto misy mpanoratra farany nandray anjara:
Lahatsoratra farany: Repuso: Angony, Tantano ary Avoahy ny Hevitry ny Mpanjifa & Widget Fijoroana vavolombelona
Jeff dia tale jeneralin'ny Jeeng, orinasa teknolojia vaovao manampy ireo orinasa hamatsy vola ny taratasiny mailaka amin'ny alàlan'ny votoaty mavitrika. Mpandahateny matetika amin'ny fihaonambe Digital Media, nasongadina tao amin'ny CNN, CNBC, ary tao amin'ny gazetiboky vaovao sy orinasa maro ihany koa izy. Jeff dia nahazo MBA manana mari-pahaizana ambony avy amin'ny Harvard Business School ary nahazo diplaoma Summa Cum Laude miaraka amin'ny BA in Economics avy amin'ny Columbia University.
Lahatsoratra farany: Mba hisarihana ny fisoratana anarana amin'ny mailaka dia tsy maintsy manaporofo ny fahaizan'izy ireo manokana amin'ny fisoratana anarana ny mpamoaka lahatsoratra.
Lahatsoratra farany: Nahoana no zava-dehibe ny fanadiovana data ary ahoana no ahafahanao mampihatra ireo dingana sy vahaolana momba ny fahadiovana
Lahatsoratra farany: Ny lasa, ankehitriny ary ny hoavin'ny tontolon'ny marketing influencer
Lahatsoratra farany: Ohatra 6 amin'ny fitaovana ara-barotra amin'ny fampiasana Artificial Intelligence (AI)
Lahatsoratra farany: Taorian'ny fifanarahana: Ahoana ny fomba fitondrana ny mpanjifa amin'ny fomba fiasa mahomby amin'ny mpanjifa
Lahatsoratra farany: Ahoana ny fomba ampiasan'ny mpivarotra mailaka ny fanadihadiana mialoha hanatsarana ny vokatra e-varotra
Lahatsoratra farany: Paikady votoaty Modular ho an'ny CMO mba hampihenana ny fandotoana nomerika
Lahatsoratra farany: Miverina amin'ny Sizzle: Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra e-varotra mampiasa famoronana mba hampitomboana ny fiverenana
Vaibhav no mpanorina ny SmartWriter. Nanampy tamin'ny fananganana orinasa an-tapitrisa dolara maro aho ary tiako ny manatona Start Ups amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny vokatra
Lahatsoratra farany: Torolàlana hahazoana mora ny backlinks sy laharana amin'ny Google amin'ny fampiasana AI
Lahatsoratra farany: Ny torolàlana haingana amin'ny famoronana sarety fiantsenana fitsipika amin'ny Adobe Commerce (Magento)
Lahatsoratra farany: Fomba fanao 6 tsara indrindra hampitomboana ny fiverenan'ny fampiasam-bola (ROI) amin'ny marketing mailaka anao
Lahatsoratra farany: Paikady 7 Ampiasain'ny Mpivarotra Mahomby mba hahazoana vola amin'ireo marika ampandrosoiny
Kyle dia mpamorona rindrambaiko ary mpiara-manorina ny Collabstr, sehatra fampifandraisana ireo marika sy mpamorona votoaty, tsena lehibe indrindra eran-tany hahitana sy hanakarama mpitaona.
Lahatsoratra farany: Ahoana ny fampiasana TikTok ho an'ny marketing B2B
Sabrina Sedicot dia mpivarotra za-draharaha, mifantoka amin'ny zavatra nomerika rehetra. Miasa ho an'ny Appnova, masoivoho mpamorona mpamorona miorina any Londres sy Roma. Miasa amin'ny tetikasa manerana ny UX/UI design, eCommerce, Branding & Content Production izy. Nahazo aingam-panahy tamin'ny endrika fitantarana nomerika rehetra izy ary liana amin'ny famoronana vahaolana mifanaraka amin'izany izay afaka mitondra traikefa amin'ny fananganana marika.
Lahatsoratra farany: Google Web Stories: Torolalana azo ampiharina amin'ny fanomezana traikefa feno
Lahatsoratra farany: Marketing Cloud: Ahoana no hamoronana automatique ao amin'ny Automation Studio hanafatra SMS Contacts amin'ny MobileConnect
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny fitarihana haino aman-jery & fialamboly ary teknolojia, i Paul Brenner dia niasa tamin'ny andraikitra c-suite maromaro, anisan'izany ny filohan'ny fizarana miaraka amin'ny Emmis Operating Company. Amin'ny maha-filohan'ny NextRadio/TagStation azy, ny asany dia nifantoka tamin'ny fanavaozana eran-tany tamin'ny alàlan'ny fampahavitrihana Chip FM amin'ny finday rehetra ho fandrefesana ny mpihaino, fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa ao anaty fiara, ary ny sehatra attribution data ho an'ny onjam-peo rehetra. Tamin'ny taona 2019, niditra i Paul Vibenomics ho lehiben'ny Strategy Officer hanampy amin'ny famolavolana ny paikadin'ny tsena ho an'ny vahaolana dokambarotra Audio Out-of-Home™ voalohany an'ny orinasa. Taorian'ny fanombohana nahomby, Brenner dia nasandratra ho Filohan'ny Audio OOH mba hanara-maso ny ezaka rehetra manodidina ny asa fampidiram-bola sy ny fiaraha-miasa mifandraika amin'izany ary vao haingana dia nanatevin-daharana ny Komitin'ny Fikarohana DPAA sy ny Komitin'ny Media Retail IAB vaovao.
Lahatsoratra farany: Nahoana ny Audio Out-Of-Home (AOOH) no afaka manampy amin'ny fitarihana ny Tetezamita hiala amin'ny Cookies avy amin'ny antoko fahatelo
Nicolás Antonio Jiménez dia mpandrindra ny varotra ao amin'ny Widen Enterprises, mpamatsy serivisy fitantanana fananan-tany nomerika. Izy dia manana fiaviana samihafa amin'ny marketing, fanaovan-gazety, fitantanana tsy mitady tombombarotra, fanentanana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ary ny fampiroboroboana ny demokrasia.
Lahatsoratra farany: Inona no atao hoe Platform Digital Asset Management (DAM)?
Ivan Baidin no loha laharana Travelpayouts ary manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana. Ankoatra ny drafitra stratejika sy ny fametrahana tanjona ho an'ny mpamorona, dia manintona mpiara-miombon'antoka sy mpanao dokambarotra vaovao amin'ny tambajotra ihany koa i Ivan. Izy dia manam-pahaizana momba ny fampiakarana ny tahan'ny fiovam-po sy ny fidirana amin'ny tsena vahiny. Voatonona tao amin'ny haino aman-jery malaza maro i Ivan, toy ny Entrepreneur, Forbes, sy ny hafa.
Lahatsoratra farany: Modely telo ho an'ny dokambarotra indostrian'ny dia: CPA, PPC, ary CPM